UROYCE 5'9 '': UPHENGULULO LWEALBHAMU YEALBHAMU - IINDABA
URoyce 5'9 wenze eyona nto ayibonayo yokudlwengula njenge-plus-one. Ukuzama ukudlulela ngaphaya kwendima yokuxhasa, ulayisha ialbhamu yakhe yesithandathu eyedwa kunye nabavelisi bexesha elikhulu, iskits, kunye nokuqwalaselwa ngononophelo.
jean grae & yintoni chris
Dlala iTrek 'Uluhlu'URoyce 5'9 'Ukuhamba SoundCloud
URoyce 5'9 (owayesakuba nguRoyce da 5'9) wenze eyona nto ibonakalayo yokudlwengula njengodibaniselwano. Ukubonakala kwakhe kokuqala kwabaninzi kwakuse-Eminem I-Slim Shady LP Njengesiqingatha esinye seZinto ezimbi zihlangana nobubi kwingoma enegama elifanayo. Wabamba umoya wakhe wesibini emva kwexesha njengomnye wamalungu aphezulu kwelebheli enkulu i-castoff Voltron eyi-Slaughterhouse (kunye noJoe Budden, uCrooked I noJoell Ortiz). Kutshanje, usebenze njengeqabane le-Nkulumbuso ye-DJ kwi-PRhyme. URoyce luphawu oluxhasayo olugqwesileyo, kodwa izinto azizange zihlangane kuyo nayiphi na irekhodi lakhe lodwa, elidla ngokutsala.
Ialbhamu yakhe yesithandathu, Maleko , ayifani kakhulu, nangona kungengenxa yokuzama ukuzama. URoyce ujonga zonke iibhokisi ephepheni apha, azilayishe ngokupheleleyo ngabavelisi bexesha elikhulu, iskits, kunye neetoni zokungeniswa ngononophelo, amaqhosha esiqhelo okuphumelela kuyo nayiphi na ialbham ye-rap yesiko. Kodwa lo mdyarho weengoma uyawa ngokufutshane nangayiphi na ibhentshi enokucingelwa, engakwaziyo ukuqhubeka okanye ukugcina amandla kude kube sekupheleni. Kukho nokuninzi kokudlwengula malunga nendlela alunge ngayo xa edlwengula, ephantse ukuba iyadika.
Umahluko ophambili phakathi kwe- Maleko kwaye iirekhodi zikaRoyce ezidlulileyo zimele ukuba kukuzinikela okutsha ekubhaleni amabali, kwaye kulula ukuva ezo giya zivula iingoma ezinje nge 'Startercoat' kunye 'neMisses.' Kwixesha langaphambili, ukhusela indawo ye-2Pac kwimbali, ephendula ukushiywa kweBillboard's Greatest Rappers of All-Time list ukusukela kunyaka ophelileyo (Ukuba iPhak ayikho kuluhlu lwakho awuyikucinga), usebenzisa Ijacket yokuqala ye-UNLV njengophawu lwempembelelo uPac wayenayo kuye. Kwi 'Misses,' ubhala malunga nobudlelwane bakhe nenkosikazi yakhe, ethetha ukuba kunzima ukuba ngumlobi omtshatileyo. Ngelixa la ngamabali asebenzayo enamanqaku anomdla, bayangqina ukuba une-knack yokucinga ngokugqithileyo (kunye nokugqithisa), ethi ithuse ezinye zezona zinto ziqatha zobuchwephesha Maleko . KwiTabernakele, uxelela ibali elibuhlungu lokulahlekelwa ngumakhulu wakhe kunye nokudibana nonyana wakhe osandul 'ukuzalwa kwisithuba seeyure kwisibhedlele esinye. Kodwa akakwazi ukwakha ukurhanela okanye ukutshintsha ithoni yakhe, kwaye into ekufanele ukuba yintsomi incitshisiwe ibe yingoma yokubhala elingana nokujika-jika-ngokujika-ngokuthatha amanyathelo afundekayo ukuya kwindawo ebekwe kwangaphambili. Utyekele ekudlwenguleni ngobuninzi, kwaye ke ufuna ukubalisa zonke iinkcukacha zebali kwithayimthebhile yomgca, iziphumo ze-telegraphing; ngamanye amaxesha kufana nencwadi engeyonyani esekhasethini.
Xa engazami ukubalisa ibali lakhe ngokweenkcukacha ezigqithileyo, Maleko isapakishwe eludongeni eludongeni ngesitayile sikaRoyce esigcwalise i-rap, exhomekeke kakhulu kumaqhina, kwiindawo ezixineneyo. Oku kunokukhwankqisa, njengakwi-Off (Jonga esibhakabhakeni kukho umlumbi wempukane / undijonge esoseni ephaphazelayo / Kwaye ingqondo yam ifana nesiqwengana esipheleleyo / Kwaye iimagazini zam ukhuphiswano zihamba zisezantsi njengeeofisi zoMthombo kunye neVibe), kwaye inokuba yinto efanelekileyo, njengokulinda (Unyana wam wafumana kubo ama-350 anyusa uKan West unxibe iBape / Askin 'kum imibuzo' bout gettin 'kwisiseko sesibini / i-Wifey textin' SMH). Ke kukho abathengisi abangaphandle abanjengo 'Khanya,' apho athatha khona ujingi kwiingoma zomculo kunye nokuphosa, kwaye 'Kunzima,' ingoma engazi nokuba leliphi ibali elizama ukulixelela.
Iingoma zekrimu wu tang
Oko akuthethi loo nto Maleko ngumlilo ogqibeleleyo, nangona kunjalo, okanye ukuba uRoyce akanayo indawo aphuma kuyo xa esenza umdlalo othile onomtsalane. Iindinyana zaseGottaknow ziyiklinikhi. I-Rick Ross kunye ne-Pusha T -Ukubeka amanqwanqwa kunye ne-somber yaseMelika ngokucacileyo. I-albhamu iphela yomelele, ukusuka 'eMelika' ukusondela 'Valiwe,' kodwa uninzi lwekhathalogu eyedwa kaRoyce, azikho iingoma ezininzi Maleko umvuzo wokwenene wokuphindaphinda okanye ukumamela ngokusondeleyo.
ii-oscars lady lady gaga 2016
ngaphezulu kwendlebe engenazingcingo irhoxisa ii-headphone
amantombazana amahle afana nomculo womgibe
ikhowudi yeorenji ephantsi koqwalaselo
Injini yobisi olungathathi cala ehotele
Isihlalo semoto sigubungela isihlalo